I-Korea ihambisa umhlaba ngokukhethekileyo e-India
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeMpilo » I-Korea ihambisa umhlaba ngokukhethekileyo e-India
uhambo ngomoya • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • iindaba • Ukwakha kwakhona • Iindaba zaseMzantsi Korea • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba ezahlukeneyo
Ngamana 11, 2021
Amazwe ayenyuka kwaye aboleke isandla e-India eqhubeka nokuba nzima ukubethwa yi-COVID-19 coronavirus.
Ukufika ngaphezulu kweentsuku ezininzi, i-India iya kufumana amakhulu ezixinanisi zeoksijini, iisilinda zeoksijini, kunye noxinzelelo olubi lokuzikhetha.
Ukuhanjiswa okokuqala kufika izolo limele malunga neepesenti ezingama-20 zezinto zonke ezinikiweyo.
Ukuza kuthi ga namhlanje, bekukho iimeko ezingama-22,662,575 ze-COVID-19 coronavirus echazwe eIndiya.
Ukuthunyelwa kwezixhobo zonyango ezifuneka ngamandla ezivela eMzantsi Korea eziqukethe i-oxygen oxygen 230, iisilinda ezingama-200 zeoksijini ezinabalawuli, kunye ne-100 yoxinzelelo lokwahlulahlula abezokufika kwisikhululo senqwelomoya i-IGI eNew Delhi, e-India, eziqala ngoMeyi 9 kwaye ziya kuqhubeka ukuya ngoMeyi 12 , 2021.
URhulumente weRiphabhlikhi yaseKorea usolulile isandla sakhe sokunceda abantu baseIndiya ukulwa ingxaki eqhubekayo ye-COVID-19 kwilizwe ngokubonelela ngonyango olukhawulezileyo. Ukuhanjiswa kuza kufika ngenqwelomoya ezi-2 ngenqwelomoya yokuqala efike izolo ngeyure ze-1630 kwaye ziya kunikelwa kuMbutho woMnqamlezo obomvu waseIndiya.
IRiphabhlikhi yaseKorea ime ngaxhatha linye neIndiya kweli lixa lobunzima ngeli xesha lobhubhane loyikekayo. Le mithwalo ye-1 neye-2 yezinto zezonyango zenza iipesenti ezingama-20 zesicwangciso sonke senkxaso. IKorea iya kuthumela izinto zonyango ngakumbi nje ukuba ikhusele ukubonelelwa kunye neshedyuli yokubhabha.
Ukuza kuthi ga ngoku, zingama-22,662,575, XNUMX iimeko ze I-COVID-19 coronavirus ixelwe eIndiya. UMphathiswa wezeMpilo uxele ukuba ukusukela ngeCawe kusasa, baninzi abantu abaswelekileyo abayi-3,754 abachaphazelekayo abanxulumene ne-COVID-19 kweli lizwe bezisa inani lababhubhileyo phantse ikota yesigidi - 246,116.
Kusekho iimeko ezingama-3,745,237 ezisebenzayo elizweni, ngokunyuka kwama-8,589 asebenzayo ngeCawa. Bebonke abantu abangama-18,671,222 baphilisiwe kwaye bakhutshwa kwizibhedlele ukuza kuthi ga ngoku kwilizwe liphela.
Xa efumana unyango olukhawulezileyo, u-Shin Bongkil, uMmeli weRiphabhlikhi yaseKorea e-India, uthe: “Ndiyathemba ukuba olu ncedo luzakunceda ukunciphisa imeko ye-COVID-19 e-India. Urhulumente waseKorea uzakuqhubeka nokusebenza ngokusondeleyo noRhulumente waseIndiya ekuphenduleni kwimiceli mngeni eqhubekayo phakathi kobhubhane we-COVID-19. ”